NX 1000 Samsung Camera selling
Electronics, Fashion and Lifestyle, Free Business Listing, Gadgets, Other Stuffs to Sell, Shopping, Stuff for Sale, Video and Music, Wanted | admin | April 8, 2014
NX 1000 Samsung Camera Korea made (White) ရောင်းရန်ရှိသည်။ အပြစ်အနာအစာမရှိ USD $ 500
Employer Job Offer, Jobs, Wanted | admin | April 7, 2014
၀န်ထမ်း(၁)ဦးအလိုရှိသည်။ Japanနိုင်ငံ၏ကုမ္ပဏီခွဲAccountingကုမ္ပဏီတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် - B.com (or) အစိုးရအသိအမှတ်ပြူဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး LCCI Level3( CPA ...
Announcement, Business Directory, Business Services, Free Business Listing, International Business Listings, Other Services, Services, Website Submission | admin | April 6, 2014
Banner Ad PromotionTrading Myanmar Ads Portal ကို အစဉ်တစိုက်အားပေးလာကြသော မိတ်ဆွေရောင်းရင်းများကို အထူးကျေးဇူးပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် Premium Banner ...
Phoenix Emperor Home Decoration & Renovation
Business Directory, Business Services, Services, Website Submission | admin | April 5, 2014
လူကြီးမင်းတို့ နေအိမ်၊ တိုက်ခန်း၊ ဆိုင်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ ခြံဝန်းများ ကို ပိုမိုတင့်တယ်သွားအောင် အလှဆင်မလား။ အဟောင်းတွေကို အသစ်စက်စက်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်မလား။ ...
Announcement, Business Directory, Business Services, Fashion and Lifestyle, Free Business Listing, International Business Listings, Other Services, Services, Wanted, Website Submission | admin | March 30, 2014
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ အင်တာနက်ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Professional ဖြစ်ပြီး စမတ်ကျကျ Website တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ချ...
Other Stuffs to Sell, Property, Property for Sale, Shopping, Stuff for Sale, Wanted | admin | March 27, 2014
ရောင်းမည်၊ မြောက်ဒဂုံ (၃၅) ရပ်ကွက် (ငွေမြန်လျှင် ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်) ပင်လုံလမ်းမကြီးပေါ်မှ ဒဲ့ဆင်း၊ ၅ မိနစ်လျှောက်။ ငွေပုလဲလမ်းမကြီးပေါ် (၄၃ပေx၆၀ပေ) ထောင့်...
Announcement, Free Business Listing, Other Stuffs to Sell, Property, Property for Sale, Shopping, Stuff for Sale, Wanted, Website Submission | admin | March 16, 2014
ရောင်းမည် ။ ( ဦးရာလူစနစ် ) တည်နေရာ = မြောက်ဒဂုံ ရာဇာဓိရာဇ် လမ်းမပေါ် (ထ) ရပ်ကွက် နေရာအချက်အချာကောင်း အိမ်နံပါတ် လှ အကျယ် = ၄၀ ' × ၁၀၀ ' မြေအမျိုးအစား =...
Property, Property for Rent, Property for Sale, Stuff for Sale, Wanted | admin | February 23, 2014
ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း ၊ မြောက်ဒဂုံ ၃၆ရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်းမကြီးဘေး၊ အချက်အချာနေရာ၊ ပေ ၄၀ x ၆၀ နှစ်ကွက်တွဲ (ညှိနှိုင်း) ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်
Kyike Wine Pagoda road | For Sale
Free Business Listing, Property, Property for Sale, Stuff for Sale, Wanted | admin | February 13, 2014
ရောင်းမည်။ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ သာယာအေး (၁)လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်။ ၁၂ပေခွဲ x ၄၅ပေ၊ မြေညီထပ် (ညှိနှိုင်း) ဖုန်း - ၀၉ ၅၁၂၈၀၄၉
To sell land at the junction area of the Dagon-Thilawa Main Rd and No.6 Mai...
Property, Property for Sale, Stuff for Sale, Wanted | admin | February 4, 2014
The land is at the junction area of the Dagon-Thilawa Main Rd and No.6 Main Rd, the land is located at the No.6 Main Rd Side. The area is 3.93 acres in squar...
Comments Off on ပငျလယျထဲကိုလှငျ့ပဈခဲ့တဲ့ စာထညျ့ထားတဲ့ပုလငျး ၂၃နှဈအကွာမှာ ပိုငျရှငျထံပွနျရောကျ
ပငျလယျထဲကိုလှငျ့ပဈခဲ့တဲ့ စာထညျ့ထားတဲ့ပုလငျး ၂၃နှဈအကွာမှာ ပိုငျရှငျထံပွနျရောကျ
admin | News | January 5, 2014
ဇိုးလီမှနျလို့ ချေါတဲ့ အသကျ၃၃နှဈအရှယျအမြိုးသ်မီးဟာ သူ၁၀နှဈသ်မီးတုနျးက ဂြာမနီကိုမိသားစုပြျောခရီးထှကျရငျး ပငျလယျထဲကိုလှငျ့ပဈခဲ့တဲ့ စာထညျ့ထားတဲ့ပုလငျးဟာ ၂၃နှဈအကွာမှာသူမလကျထဲကိုပွနျလညျရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီစာပါပုလငျးကို
Comments Off on လေယာဉ်ပေါ်လဲသိဘူး
လေယာဉ်ပေါ်လဲသိဘူး၊ ဆေးလိပ်က သောက်ချင်နေတာကို
ဂျာမနီနိုင်ငံသား Mathias Jorg, ၅၄ နှစ်ဟာ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်မှု၊ လေယာဉ်ဝန်ထမ်းများအား ဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့ သြစတေးလျနိုင်ငံ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာ တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ဆေးလိပ်မသောက်ရရင် လုံးဝမနေနိုင်တဲ့သူ့ ရဲ့အာသီသဟာ စင်္ကာပူကနေ သြစတေးလျကိုပျံသန်းတဲ့ UAE Aircraft ရဲ့၇နာရီခွဲပျံသန်းချိန်ကိုတောင်မအောင့်အီးနိုင်ပဲ
Comments Off on Have A Great Happy New Year 2014
Have A Great Happy New Year 2014
admin | News | December 31, 2013
နှစ်သစ်ကိုရောက်တိုင်း ဟိုး ၁၉၈၀ ခုနှစ်တုန်းက အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ ABBA အဖွဲ့ ရဲ့ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့ Happy New Year သီချင်းလေးကို သတိရမိပါတယ်။ နှစ်ဟောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ စိတ်ညစ်၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာ အားလုံးကိုထားခဲ့ပြီး နှစ်သစ် ၂၀၁၄ ကို
Comments Off on 10 best smartphones of 2013
10 best smartphones of 2013
admin | News | December 28, 2013
၂၀၁၃ အတွက် အကောင်းဆုံး Top Ten Smart Phone ၁၀ မျိုးစာရင်း
စမတ်ဖုန်းလောကရဲ့အစဉ်အလာအတိုင်း ဒီနှစ်ထဲမှာလဲ Brand အမျိုးမျိုးက ပုံစံမျိုးစုံ၊ Function မျိုးစုံနဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်ပြီး အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
၁) Apple iPhone 5S
အားလုံးထဲမှာတော့ အများသိပြီးတဲ့အတိုင်း iPhone 5S က ထိပ်ဆုံးမှာပဲရပ်တည်နေတာပါ။
မိုဘိုင်းဖုန်းလောကရဲ့ ပထမဆုံးမြန်နှုန်းမြင့် 64 bit processer နဲ့ လက်ဗွေနှိပ်ပြီးဖုန်းကိုဖွင့်လို့ရတဲ့ Function အသစ်တွေက၊ Apple ရဲ့ Brand နဲ့အတူထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။
၂) Samsung Galaxy Note 3
Comments Off on MRT Sword-wielding ‘samurai’ charged
MRT Sword-wielding ‘samurai’ charged
admin | News | December 19, 2013
စင်္ကာပူရထားပေါ်မှာ ဓါးရှည်ကိုင်သောင်းကျန်းတဲ့ ဆာမူရိုင်းကိုဖမ်းလိုက်ပြီ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက် တနင်္လာနေ့ က ဂျပန်ဆာမူရိုင်းဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားပြီး ဓါးရှည်ကိုင်ခြိမ်းခြောက် သောင်းကျန်းခဲ့တဲ့ Peter Chua Teck Choon, အသက် ၃၉နှစ်ကို ရဲတွေဝိုင်းဖမ်း ထိမ်းသိမ်းပြီး စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံမှာ ထိမ်းသိမ်းခဲ့ရပါတယ်။
တရားခံမှာ စိတ်ဝေဒနာ အနည်းငယ်ခံစားနေရဟန်တူပြီး၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ အိရှင်းလု ကလပ်က အီအိုင်ဒို နည်းပြဆရာတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့အပြင်၊ ..
Comments Off on Smart Bra prevents women from over eating
Smart Bra prevents women from over eating
admin | News | December 14, 2013
အမျိုးသမီးများအတွက် Smart Bra လာတော့မယ်
Rochester နှင့် Soythamptom တက္ကသိုလ်များမှ အင်ဂျင်နီယာများ ပူးပေါင်းပြီး Microsoft ရဲ့ mobile platform ကို အသုံးပြုပြီး အမျိုးသမီးများ စိတ်လှုပ်ရှားမှူဖြစ်နေစဉ်အတွင်း အစားအသောက်များ စားသုံးတဲ့အခြေအနေကို လေ့လာနိုင်ဖို့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သတင်းပေးပို့နိုင်တဲ့ Smart Bra ကိုစမ်းသပ်နေပါပြီ။
ပညာရှင်များက အဓိကအာရုံစိုက်တီထွင်နေတဲ့အချက်က အရမ်းကိုကောင်းမွန်ပြတ်သားလှပါတယ်။ဥပမာ စိုးရိမ်စိတ်များနေတဲ့အခါ ..
Comments Off on စင်္ကာပူ အကြမ်းဖက် လူထုအုံကြွမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း
စင်္ကာပူ အကြမ်းဖက် လူထုအုံကြွမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း
admin | News | December 9, 2013
မနေ့ ညကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူ ၄၀၀ ကျော်လောက်ပါဝင်အကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့ လူထုအုံကြွမှု ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအနေနဲ့ တက်ကြွပါဝင်လှုပ်ရှားသူ ၂၇ ဦးကိုဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ စင်္ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ အတိအလင်းကြေငြာပါတယ်။ ဦးဆောင်ပါဝင်သူတွေထဲမှာ အိန္ဒိယလူမျိုး ၂၄ ဦး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့(ရှ်) နိုင်ငံသား ၂ ဦးနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခင်းဖြစ်ပွားမှု အပြည့်အစုံမှာ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်၊ ည ၉ နာရီ ၂၃ မိနစ်မှာ အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ..
Comments Off on စင်္ကာပူမှာ အကြမ်းဖက်ကုန်ကြပြီ
စင်္ကာပူ အကြမ်းဖက် လူထုအုံကြွမှု
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်လို့ ဆိုရမဲ့ အကြမ်းဖက်လူထုအုံကြွမှုကြီးတစ်ခု ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ည (၁၀) နာရီဝန်းကျင် Little India, Race Course Road မှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးသတင်း အတိအကျမရသေးပေမဲ့ လူနာတင်ယာဉ်တွေ၊ ရဲကားတွေကိုပါ ပက်လက်လှန် မီးတင်ရှို့ တဲ့အထိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သတင်းအရ စင်္ကာပူ Bus Car တစ်စီးက ဘင်္ဂလားဒေ့(ရှ်) အလုပ်သမားတစ်ဦးကိုတိုက်မိသေဆုံးရာက လူအများစုဝေးလာပြီး အကြမ်းဖက်လူထုအုံကြွမှု စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါသတကြီးဖြစ်နေတဲ့ ခန့် မှန်းလူ ၄၀၀ လောက်ရှိတဲ့ လူအုပ်ကြီးဟာ ရဲကားတွေကို ခဲနဲ့ ထု၊..
Comments Off on Sour Plum Juice
admin | News | December 1, 2013
ခံတွင်းရှင်းစေသော ဆာငံသီးဖျော်ရည် (သို့ ) Sour Plum Juice ပြုလုပ်နည်း
မိတ်ဆွေများသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆားငံသီး (သို့ )ဆားငံစေ့ဟာ ရှောက်သီး၊ သံပုရာသီးတို့ မှာပါဝင်တဲ့ Citric Acid မျိုးပါဝင်လို့ သွေးကိုကျဲစေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုအားကောင်းစေပါတယ်။ ဒီချိုချဉ်ချဉ် ငံကျိကျိ အရသာသာဟာ သောက်လေသောက်လေငတ်မပြေ ဆိုသလိုဖြစ်စေပြီး၊ အစာစားချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ဆာငံသီးဖျော်ရည်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သိပ်သောက်လေ့သောက်ထမရှိပေမဲ့၊ ..
admin | News | November 24, 2013
သံစဉ်အလှလေးတွေ ဖန်တီးတတ်တဲ့ ဂျိုး
အသက် ၅၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား Rock Guitarist Joe Satriani ဟာ Instrumental Solo သံစဉ် အလှလေးတွေကို ဖန်တီးလေ့ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး Rock Guitar တွေထုတ်လုပ်တဲ့ Hoshino Gakki Corporation မှာတောင် Ibanez JS Series ဆိုပြီး သူ့ ရဲ့ Brand Signature နဲ့ Rock Guitar တွေကို စီးရီးလိုက် ထုတ်လုပ်ရောင်းချရပါတယ်။ အံ့မခန်း ပါရမီ၊ ခံစားချက်(Mood) အပြည့်နဲ့..
Comments Off on World’s most expensive diamond
admin | News | November 20, 2013
Pink Star လို့ အမည်တွင်တဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးစိန်ကို လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၃သန်းနဲ့ လေလံတင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ရတနာသုတေသီအဖွဲ့GIA က အသိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ အရည်အသွေးကောင်းလှတဲ့ ဒီစိန်ကြီးကို
Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Postal Code များ (သို့ ) လက်တီကျု လောင်တီကျု
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Postal Code များ (သို့ ) လက်တီကျု လောင်တီကျု
admin | News | November 11, 2013
ကျနော်လဲ Geo သမားမဟုတ်တော့ သေချာတော့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အချို့ တိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာလို ကိုယ်နေတဲ့ အိမ်၊ ခြံ၊ တိုက်ခန်းရေရာ အတိအကျအတွက် နိုင်ငံအလိုက်၊ နေရာအလိုက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Postal Code မျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။
တစ်ကယ်တော့ နေရာငှာန၊ မြေပုံတွေက လက်တီကျု ၊ လောင်တီကျု အပေါ်အခြေခံပြီးသတ်မှတ်ကြတာပါ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် …
Comments Off on မိုးစက်ဝိုင် နဲ့ Miss Universe 2013
မိုးစက်ဝိုင် နဲ့ Miss Universe 2013
ယခု လူအများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Miss Universe ၂၀၁၃ ပြိုင်ပွဲကို နိူဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ က ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့ မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၈၆ နိုင်ငံက မယ်များ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘင်နီဇွဲလား (Venezula) မယ်က ….
All times are GMT 6.5. The time now is 8:53 pm.